Nkọwa ihe omimi Otu esi eji ndi ntanetị weebụ ewezuga Ọdịnaya gị
Ihe nchapu bụ ihe edere iji wepụ data site na saịtị. Ngwa ngwá ọrụ na-arụ ọrụ site n'iziga otu ajụjụ na mkpokọta weebụ ma gbanwee data HTML. Nchịkọta weebụ bụ usoro e ji eme ihe na ahịa ahịa na ụlọ ọrụ ntanetị n'ịntanetị.
Otu esi eji scraper web
Onye ntanetị weebụ na-ahọrọ ọdịnaya ị chọrọ n'ime akwụkwọ ma na-agbanwe data ịchọrọ n'ime usoro na protocol. Ngwaọrụ ntanetị weebụ na-arụ ọrụ n'ịwepụta data dị ka vidiyo, nkọwa ngwaahịa, ederede, na ihe oyiyi - barmah hats for sale.
Ị na-arụ ọrụ na ịdọpụ data sitere na saịtị na-enweghị koodu nzuzo? Nchịkọta weebụ bụ ụzọ aga. Dị ka akara maka ego ị nwere, ị nwekwara ike ịmepụta ihe ntanetị weebụ gị site na iji ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche dabara adaba ahịa gị.
Site na ntanetị weebụ, ịnwere ike ịhazi ọdịnaya site na iji asụsụ mmemme dika Ruby, PHP, na Python. Otú ọ dị, ụfọdụ nsogbu nwere ike ịdị n'etiti gị na ntanetị weebụ. Ihe ịma aka ndị a na-egbochi webmasters iji iji scrapers weebụ mee ihe n'ụzọ dị irè. Lee ụfọdụ ihe ịma aka ị ga-eburu n'uche.
Ma ị bụ onye na-amalite ma ọ bụ pro, ịgbaso ntụziaka nkuzi maka otu esi eji ihe ntanetị weebụ bụ ndụmọdụ. Dị ka ọmụmaatụ, ịghara iji ụdị nkwupụta a na-eme ka o siere ndị odeakwụkwọ ike ịgụ ma kpaa data gị.
HTML5 mepụtara saịtị
A na-emepụta ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na HTML5, isi ihe na-eme ka ọ sie ike maka weebụ.
Ntọala weebụ dị iche iche
Atụmatụ maka otu esi eji ihe ntanetị weebụ. obere saịtị
Iji nweta data kpọmkwem site na saịtị nwere ike ịghọ ihe dị mfe. na-arụ ọrụ na ịdọpụpụta data sitere na obere saịtị, tụlee ịmepụta ma na-ahazi ihe ntanetị gị. Cheta iji hazie ma setịpụ ọrụ mmelite na 100%
Na-eduzi otu esi wepu data site na iji scrapers web
Mee atụmatụ nke nwere ike ịnweta HTML ederede
Nyochaa akara ndị gụnyere data site na nyochaa usoro DOM gị
Zụlite nhazi usoro iji wepụ data
Lelee anya gị nchịkọta iji nakọta data na usoro a pụrụ ịhazi
usoro Duck bụ ihe atụ magburu onwe ya nke koodu HTML. Nke a na koodu na-enweta mkpokọta URL dị ka ihe ntinye ma na-egosiputa nke ọma edepụtara data dika mmepụta. Usoro ọbọgwụ na-arụ ọrụ na ị na-ekpebi onye na-agụ ya iji hazie data gị site na ịhazi ihe ndị ị chọrọ ịhazi. Ọ bụrụ na onye na-agụ usoro agụghị agụ URL, a na-eziga URL na onye ọzọ na-agụ ya.
Maka ndị na-ebido ụzọ, a na-atụ aro ịmepụta nzaghachi ngwa ngwa iji nata mkpesa banyere ọdịnaya duplicated. Nzaghachi azụghachi na-enyere ndị ahịa na ndị na-ede blọgụ aka ịmepụta ọdịnaya dị elu na nke ọhụrụ. Dị ka onye na-elekọta ụlọ ọrụ, na-ebute ụzọ kacha mma na mmapụta.
N'achụ ahịa, njedebe na-eme ka ụzọ dị mma. Site na mmalite okwu, tụlee nyochaa ọnyà na nsogbu ndị ga-egbochi mgbasa ozi n'ịntanetị gị. Ịhọrọ usoro nchapu nwere ike ịbụ ihe dị mfe maka ndị ịmalite. Ekwela ka ihe nkedo mebie mgbasa ozi ntanetị weebụ gị. Debanye na Ihe eji eme iji nwekwuo nkuzi banyere otu esi eji ihe ntanetị weebụ ma nweta ọdịnaya dị elu.